बिग समाचार – Page4– BIG FM 101.2 MHz
Home » बिग समाचार (page 4)
नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’ दोस्रो दिन सुस्मिता, रिया, समिक्षा र यमप्रसाद विजयी
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ७ भदौ / बिग एफएम १०१.२ ले तीजको अवसरमा सुरु गरेको ‘बिग तीज बिग धमाका’ रेडियो गेम शोमा दोस्रो दिन पनि चार जना विजयी भएका छन् । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर बिग एफएमले नोभा दहीसँगको सहकार्यमा रेडियो गेम शो संचालन गरेको हो । हिजोदेखि सञ्चालन भएको रेडियो गेम शो भोलिसम्म चल्नेछ । नोभा …
नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’ पहिलो दिन सरु, रमा, शर्मिला र सूचना विजयी
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ६ भदौ / बिग एफएम १०१.२ ले आजदेखि तीजको अवसरमा ‘बिग तीज बिग धमाका’ रेडियो गेम शो सञ्चालन गरेको छ । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर बिग एफएमले नोभा दहीसँगको सहकार्यमा रेडियो गेम शो संचालन गरेको हो । आजदेखि सञ्चालन भएको रेडियो गेम शो विहीबार अर्थात् भदौ ८ गतेसम्म चल्नेछ । नोभा दही बिग …
नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’, बम्पर प्राइज सुनको गहना, फेसबुक कमेन्टबाट पनि सहभागिता
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ५ भदौ / हरेक चाडपर्व होस् या नयाँ वर्ष । जहिल्यै रेडियो ईभेन्टमार्फत स्रोतासँग नजिकिने पोखराको बिग एफएम १०१.२ ले अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यसपटक पनि तीजको अवसरमा ‘बिग तीज बिग धमाका’ रेडियो गेम शो सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर बिग एफएमले नोभा दहीसँगको सहकार्यमा रेडियो गेम शो संचालन गरेको …
साउन १६ देखि पोखरामा ‘मेगा एजुकेशन फेयर’
Rem Bk Featured, बिग समाचार, व्यापार / व्यवसाय
रेम बिक पोखरा, ९ साउन । पोखरामा दोस्रो सँस्करणको ‘मेगा एजुकेशन फेयर’ हुने भएको छ । वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै यो शैक्षिक मेला हुन लागेको हो । इभेन्ट कम्पनी ‘वान अप इभेन्ट्स एण्ड मिडिया सोल्यूसन्स’ले यो शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । आयोजकले दिएको जानकारी अनुसार शैक्षिक मेला साउनको १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म चल्नेछ । पोखरा …
पोखरा ‘नो हर्न जोन’ तर एक हप्ता सचेत गराईने अनि मात्रै कारबाही
पोखरा १ साउन । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकालाई आइतवार नो हर्न जोन घोषणा गरिएको छ । पोखरा अघि काठमाण्डौमा हर्न बजाउन नपाईने नियम लागू गरिसकेको छ । आइतवार हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको भएपनि यसलाई एक सातापछि मात्रै कार्यन्वयनमा लगिने भएको छ । विना तयारीको घोषणा कार्यन्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि साउन ८ गतेदेखि मात्रै निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउनेमाथि कारवाही सुरु गर्ने ट्राफिक …
पोखरा स्पोटर्स अवार्डको तयारी. मूल आयोजक समिति र आठ उपसमिति गठन
बिग न्युज पोखरा, २१ असार / नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, कास्कीले दोस्रो पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड साउन २१ गते शनिबार गर्ने भएको छ । विविध कारणले पूर्वनिर्धारित मितिभन्दा एक साता अगावै अवार्ड गर्ने निर्णय भएको मञ्चले जनाएको छ । अवार्ड सम्पन्नार्थ मञ्च, कास्की अध्यक्ष केशव पाठक संयोजक र उपाध्यक्ष दिननाथ बराल उपसंयोजक रहेको १०१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ …
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ७ को मतगणना जारी
Rem Bk बिग समाचार, स्थानीय
पोखरा ३ जेष्ठ बैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ७ को जारी रहेको मतगणनामा अहिलेसम्म ५ सय मत गणना भएको छ । जसमा नेपाली काग्रेसले मेयरमा १९२, उपमेयरमा १६१, वडाअध्यक्षमा २०९, महिला सदस्यमा १८५, दलित महिला सदस्यमा १५१, खुल्ला सदस्य पहिलोमा १०८ तथा खुल्ला सदस्य दास्रोमा १५५ मत प्राप्त गरेको छ । …
पोखरा लेखनाथ महानगर ३ मा कांग्रेसको प्यानल बिजयी
Rem Bk बिग समाचार
पोखरा ३ जेठ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसको प्यानलले जितेको छ । वडा नम्बर ३ को वडाध्यक्षमा रबिन्द्र बहादुर प्रजु सहितको कांग्रेसको प्यानल बिजयी भएको हो । बिजयी प्रजुले ९ सय ६३ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका शशीधर पराजुलीले ६ सय ४८ मत प्राप्त गरे । महिला सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मी पराजुली, …
बिग आइकनले पाए यामाहाको स्कुटर
रञ्जन अधिकारी पोखरा, १० वैशाख / सातौं बिग आइकनले पुरस्कार स्वरुप यामाहाको स्कुटर प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, फस्र्ट रनरअप र सेकेण्ड रनरअपले पनि नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । यामाहा ब्राण्डका मोटरसाइकलको यहाँस्थित आधिकारीक विक्रेता बिश्वकर्मा अटो वक्र्स नयाँबजारले बिग आइकन सुवास गुरुङलाई स्कुटर प्रदान गरेको हो । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीका म्यानेजिङ डाईरेक्टर सरोज श्रेष्ठले सुवासलाई स्कुटरको …
मनिपाल अस्पताल संवेदनहीन ! घाईतेलाई उपचार गर्न नमानेपछि स्थानीयले गरे तालाबन्दी
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ९ वैशाख / बाहिर मुसलधारे वर्षा । चर्को गड्याङगुडुङ । सामाजिक सञ्जाल भित्र भने मनिपाल अस्पताल र डाक्टर विरुद्ध चर्को आलोचना । शनिबार बेलुकी फेसबुक/टुइटरमा जिउँदा भगवान्का रुपमा कहलिएका डाक्टर विरुद्ध निकै चित्त दुःखाईका भावहरु पोष्ट भए । सेवाभावले चिकित्सक जस्तो संवेदनशील पेशामा रहेका डाक्टर र पुनर्जिवन दिने अस्पतालविरुद्ध यसै खनिएका भने होईनन् । शनिबार मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्कंदा …